Ulale ebaliwe umholi weDudula | Scrolla Izindaba
USimon “Msayza” Rati ongumholi wenhlangano enodlame elwisana nabaphuma emazweni angaphandle kuleli i-Alexandra Dudula Movement ukhalelwe ngamasango kasigonyela ngemuva kwezinyanga ezingelwa ngamaphoyisa.
Amaphoyisa ase-Alexandra abophe uRati ngoLwesine ekuseni ngecala lokudala udlame emphakathini, ngemuva kokuthi iqembu lakhe lichithe izinyanga lisabisa amabhizinisi ngase-Pan Africa Mall e-Alexandra.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uLieutenant-Colonel Mavela Masondo ukuqinisekisile ukuboshwa kwalo mlisa (47) ngemuva kokubaleka izinyanga ezimbalwa.
Uzochitha impelasonto ezitokisini zamaphoyisa futhi uzovela eNkantolo yeMantshi yase-Alexandra ngoMsombuluko.
Selokhu yaqalwa inhlangano yakhe, amaphoyisa ebehlezi ethola izincingo zokuthi babophe abaholi beDudula Movement, abaletha ukwesaba nongabazane kubatshalizimali bendawo kanye nosomabhizinisi elokishini elidala nelimpofu kakhulu ezweni.
Umlayezo wayo ulula futhi awukho emthethweni: khiphani abaphuma emazweni angaphandle abahlala lapha kungakhathaliseki ukuthi bahlala ngokusemthethweni noma cha.
Le nhlangano ibilokhu idala izinxushunxushu kusukela kudala.
Iqale ukusebenza ngendlela okungeyona ngesikhathi bethula umbhalo onophawu lwamaphoyisa olusemthethweni ngoNhlolanja, obekusho ukuthi amaphoyisa ayingxenye yezinhlelo zayo.
UMnyango wamaPhoyisa kaMasipala waseGoli (i-JMPD) uvuke bhejazane, wazama ukuziqhelelanisa nale nhlangano.
Kodwa naphezu kwesiqalo sayo esiyihlazo, ukusebenza kwayo kuye kwaqhubeka futhi iye yalandelwa ngabantu abaningi.
Usuku nosuku, bayanda abantu abajoyina i-Dudula Movement e-Pan Africa Mall ukuze basabise amabhizinisi abaphuma emazweni angaphandle. Bangene ezitolo, becela wonke umthengisi ukuthi aveze amaphepha akhe okufakazela ukuthi ukuleli ngokusemthethweni. Lokhu kukodwa kuyicala; izakhamizi azikwazi ukucela ezinye izakhamizi ukuthi zibakhombise omazisi bazo.
Ezinyangeni ezilandelayo, izitolo eziningi okusolwa ukuthi ngezabaphuma emazweni angaphandle zishisiwe futhi ngokuvamile zicekelwe phansi. Abanye abantu baze badutshulwa balinyazwa ngamalungu ale nhlangano enodlame.
Ukusebenza kwabo bekusakazwa kabanzi ngabezindaba nokugcine kudonsa amehlo aboMnyango wezaseKhaya.
NgoNdasa izikhulu zingene kuleli lokishi zenza lokho ezikubiza nge-Operation Restore lapho ezibophe khona abantu abaningi abaphuma emazweni angaphandle abahleli kuleli lokishi ngokungemthetho.
Abaphuma emazweni angaphandle, impilo yabo yaba usizi, eziphindiselele la maqembu amabili aye aba nenxabano enodlame mhla ziyisikhombisa kuNdasa.
Ngosuku olulandelayo le nhlangano iye yaphoqa ukuthi izitolo zivalwe kungakhathalekile ukuthi ezabaphuma emazweni angaphandle noma ezabaseNingizimu Afrika.
I-Scrolla.Africa siveze uMsayza oveze ukuthi useke wavalelwa ejele amahlandla amaningi. Waboshwa okokugcina kungoZibandlela odlule.
Yize iDudula Movement isanda kugqama kuzwelonke ezinyangeni ezinhlanu ezedlule, amalungu ayo aseneminyaka eminingi esebenza elokishini.
Sebekhiphe abantu abaningi ezindlini zomxhaso bethi izindlu zomxhaso zikahulumeni akumele abaphuma emazweni angaphandle bahlale kuzo.
Kubikwa ukuthi bebelanda imali yerenti kubantu baseNingizimu Afrika ababafake kulezi zindlu ngemuva kokukhipha abaphuma emazweni angaphandle kuzo.
Amalungu ale nhlangano asebekwe amacala obugebengu angaphezu kuka-200 abhaliswe esiteshini samaphoyisa e-Alexandra, okubalwa kuwo awokukhomba ngesibhamu, awokushaya kanye nawokuxosha abantu ngokungemthetho.
Yize emasontweni ambalwa edlule iDudula Movement ingakaze ibandakanyeke ezigamekweni zodlame kuleli lokishi eligcwele abantu, abaphuma emazweni angaphandle basaqhubeka nokuhlala ngokwesaba.